श्रीमती बेच्न खाेजेकाे झुटाे मुद्दामा जेल बसेका बमबहादुरकाे कथा (भिडियोसहित) श्रीमती मायालाई बमबहादुरले झुक्याएर बेच्न लगेको जाहेरी मानव बेचबिखनविरुद्ध सक्रिय संस्था माइती नेपाल र प्रहरीको योजनामा तयार गर्न लगाइयो Share
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिव बने पर्वतका ३२ वर्षे प्रदीप परियार Share
देउवाले कांग्रेस फुटाएपछि राजनीति छाडेका नेम्वाङ हिजोआज अक्षरमार्फत विद्रोह गर्छन् Share
पहिलो दलित महिला सीडीओ सीताको संघर्षगाथा- पँधेरोमा पानी थाप्न दिँदैनथे, होटलमा खाएको भाँडा मझाउँथे Share
अब आकाशमै गर्नुस् डिनर : अँगेनोले जमिनदेखि आकाशसम्म फैलाउँदैछ व्यवसाय Share
जो आफूले थाहा नपाउँदै रातारात 'स्टार' बने चाहे बालक सहदेव हुन् वा ६० नाघेका भुवन, रानु र टेड, यिनकाे सफलताले पुष्टि गर्छ, क्षमता भएका मान्छेको भाग्य खुल्न कुनै उमेर वा परिवेश चाहिँदैन 1 min read Share
इन्जिनियरिङ छाडेर बाख्रापालन रोजेका खनालको वार्षिक कमाइ २० लाख पहिला 'धेरै पढेर बहुलायो भन्ने तिनै गाउँलेहरू अहिले दाजुभाइको प्रगति देखेर चकित हुन थालेका छन् । अहिले त उनीहरूकाे चर्चा जिल्लामा समेत हुन थालेको छ ।4min read Share
बुढीखाेलाकाे बाढीले रातभर बगाएर पनि बाँचेकी सानुमाया बर्खामा बुढीखोलाले बाटो बिराएर हो कि ऊ बस्तीहरूमा सुटुक्क पस्छ । मानिसहरूको चीत्कार सुन्दैन । अनि छाप्राहरूमा जीवन बिताइरहेकाहरूको खुसी बगाउँछ । यही खोलाको बाढीले सानुमायाका दिदीभेनालाई लग्योे, उनीहरूको सानो छोरालाई लग्यो । तर, फेरि फर्काएर ल्याएन । 12 min read Share
‘पैसा खाडीमा भन्दा धेरै तितेपातीको झाडीमा रहेछ’ गत आर्थिक वर्षमा २० टन मोक्जा जापान निर्यात गरेका बलामीले अगामी तीन वर्षमा ६० टन मोक्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै उनले ३० देखि ४० लाख नेपाली रुपैयाँबराबरको मोक्जा जापान निर्यात गरेका छन् । अब भने त्यसलाई बढाएर करोडमा पुर्‍याउने उनको सोच छ ।9min read Share
‘हम चित्र बनारहल्छी हमर मिथिलाकी’ बुढियामाई लक्ष्मणलाई पढाएर ‘ठूलो सर’ अर्थात् ठूलो मान्छे बनाउन चाहन्थिन् । तर, उनी आमाकै पथमा दौडिए । ‘बुढियामाईले ‘ठूलो सर’ बन्नू है भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो । उहाँले दैलोमा बनाएको चित्र हरेक दिन नियाल्थे । मलाई आमाको कलाले तान्यो,’ लक्ष्मण मुस्कुराउँछन् ।7min read Share
अन्जान केटीसँग भिडियो च्याटलगत्तै ठग स्क्यामरको फोन आयो धेरैजसो मानिस सामाजिक सञ्जालका नक्कली खाता नचिनेर फस्ने गरेका छन् । चाहे त्यो फेसबुक होस् वा व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम । तर, अपवादबाहेक नक्कली खाता पत्ता लाउन गाह्रो छैन ।9min read Share
महाबौद्धका भरियाको दैनिकी, ६३ वर्षका वृद्धको काँधमा सय किलोको भारी १० वर्षको उमेरदेखि बोरा बोक्न थालेका शिव रायले ६१ वर्षको हुँदा पनि भारी नै बोकिरहेका छन् । नरदेवी चोकमा परिवारसँगै बस्छन् उनी । रायकी श्रीमती पनि महाबौद्धमा मकै पोलेर बेच्ने काम गर्छिन् । 10 min read Share
भारतीय अफवाहका कारण नेपाली चियाको गुणस्तरमा प्रश्न, उत्पादन घटेपछि दुष्प्रचार नेपाली चिया–कफी भन्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अर्ग्यानिक र गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने छाप नै छ । तर, भारतीय व्यापारीले नेपाली चिया–कफीको तीन दशकयता गुणस्तरमा प्रश्न उठाएर नकारात्मक प्रचार गर्दै आएका छन् ।6min read Share
कराँते खेल्न चाहन्थिन् पुष्पा, म्याराथन धाविका भइन् पुष्पालाई कुनै समय कराँते खेल्ने रहर थियो । तर, परिवारका अभिभावकले यसमा सपोर्ट नगरेपछि उनको यो रहर रहरमै सीमित हुन पुग्यो । कराँते खेल्ने चाहना भए पनि विद्यालयमा भएको दौडमा प्रथम भएपछि दौडमा उनी सहभागी हुँदै गइन् । 12 min read Share
'झण्डै मरिया थ्याे, तैपनि जान्जी-आउन्जी रमाइलै भो बड्डा’ एसईईसँगै पढाइलाई बिट मारेका खम्माका बुबा कालु बुढा यार्सा बेच्न भारत गएका छन् । ठुल्दाइ काठमाडौंमै यार्सा बेचिरहेका छन् । आमा, दिदीबहिनी, भाउजू र दाइका छोराछोरी घरकै काम गरी बस्छन् 8 min read Share
दैनिक ६ घण्टा हिँडेर वडा कार्यालय आउजाउ गर्ने ‘घनश्याम बा’ वडाध्यक्ष भएको तीन वर्षसम्म उनले आउजाउ गर्न आठ घण्टा खर्चिन्थे । एक वर्षअघि तत्कालीन गाविस भवनमा रहेको कार्यालय सारेपछि उनको एक घण्टा समय बचत भएको छ । 10 min read Share
पैसा नतिरेको भन्दै स्कुलबाट निकालिएका क्षितिज जब आईफोन कम्पनीमा काम गर्न पुगे... ८ कक्षामा हुँदा पैसा नतिरेको भन्दै क्षितिज स्कुलबाट निकालिए । तर, जिल्लास्तरीय परीक्षाको समयमा भने परीक्षा दिन भनेर स्कुलले बोलायो7min read Share
विदेशबाट फर्केर हाइड आउट रेस्टुरेन्ट खोलेका अमृत भन्छन्– सिस्टम बुझ्न पनि एक पटक विदेश जानुपर्छ केही अलग प्रकारको काम गर्न चाहन्थे अमृत । उनलाई पैसा मात्र कमाउनु थिएन । एउटा आफ्नै अनि छुट्टै ब्रान्ड बनाउने चाहना उनको थियो ।9min read Share
दुई–दुई वर्षमा नेपाल घुम्न आउने बेल्जियन जोडी ‘विचित्र देश छ । तेस्रोपटक आएँ । नेपाल आइराख्ने भएकाले आफ्नै घरजस्तो लाग्छ । नेपालीहरू परिवारजस्तै लाग्छ ।’ 8 min read Share
कोरोनाले छेक्न नसकेको पनौतीको मकर मेला कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला ७० वर्षीया सत्यवतीलाई किन नुहाउन डर लागेन त ? 'यो कोरोना नै जाओस् भनेर हो नुहाएको मैले’, उनले अनौठो जवाफ फर्काइन् ।9min read Share
समाजवाद नआएसम्म खाली खुट्टा हिँड्ने प्रण गरेका ‘सांसद’ नाङ्गा गोडा सिंहदरबारको अघिल्तिर उभिएका शंकर सन्न्यासीझैँ देखिन्थे । पछाडि आइरहेका एक सांसदले भने, ‘किन रोक्नुभएको ? उहाँ सांसद हो ।’ 12 min read Share
खोपकार्ड अनिवार्य गरिएपछि खोप लगाउनेको चाप बढ्यो फेरि कोभिड–१९ संक्रमण तीब्ररूपमा फैलिएपिछ सरकारले भीड नियन्त्रण गर्न कडाइ गरेकाे छ । सरकारले कार्यालय, हाेटल, सिनेमा हललगायत क्षेत्रमा पूर्णखोपकार्ड अनिवार्य गरेसँगै देशका विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउन आउने सर्वसाधारणको भीड बढेको छ । 8 min read Share
इजरायलमा केराखेती सिकेका चन्द्रको तरक्की, महिनैपिच्छे साढे २ लाख हातमा कृषि पेसाप्रतिको सम्मान, बजेट विनियोजन, कृषि उद्योगको विस्तार, प्रविधिको विकासका कारण इजरायलले कृषिक्षेत्रमा सोचेभन्दा ठूलो विकास गरेको बस्नेत बताउँछन् ।5min read Share
पशुपतिमा साँढे आतंक : कोष भन्छ- साँढेका छेउमा किन जानु ? ‘साँढेहरूलाई छाडा नै छोड्ने हो । साँढेलाई बाँधेर राख्नू भनेर कतै लेखिएको छैन,’ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडाले भने । 11 min read Share
1234567 8910 26 27 Next